Aurvote kana maitiro ekuvhota mapakeji eAUR repository | Kubva kuLinux
Aurvote kana maitiro ekuvhotera AUR repository mapakeji
aurvote ipakeji ye vhota mapakeji e YEDU repository Arch Linux kuverengerwa mune ramangwana mune "yepamutemo" nharaunda repositi. Izvi zvinongoitika chete kana paine vashandisi vazhinji vanechido machiri uye chinoshandiswa zvakanyanya uye kuvhota.
Iko mukana wekuva nepakeji munharaunda nekuve nayo muAUR ndeyokuti hazvidi kuti uunganidze uye inogona kuiswa nemurairo Pacman panzvimbo pe yogati. Kunyangwe kuunganidzwa kweAUR mapakeji kunoitwa otomatiki neiyo ABS Zvinotora nguva shoma kana yatove yakarongedzwa uye isu tinoiisa kubva munharaunda.
Kuvhota aurvote yemapakeji iwe aunofarira kubva kuAUR kunogona kutaridzwa senzira yekupa rubatsiro munharaunda uye sezvo isingade nhamburiko huru ndicho chinhu chinofanirwa kuitwa nevapfuri vese.
Kuziva zvinoitwa nepakeji iyi, ngatione kuti tingaiisa sei. aurvote iri mune yeAUR repository, saka isu tichafanirwa kuiisa nemirairo yaourt.
yaourt -S kuvhura
Kana tangoiswa isu tichafanirwa kunyoresa mu AUR peji uye gadzira faira inonzi .vote mune dhairekitori redu HOME ine zvinotevera zvirimo, uko [zita rekushandisa] uye [password] richava iro zita rekushandisa nephasiwedi zvakateedzana nezvatakanyoresa nazvo.
mushandisi = [mushandisi] pasa = [password]
Iye zvino isu tinongofanirwa kuvhotera mapakeji atinoda nawo:
$ aurvote [pasuru]
Chekupedzisira, kana aurvote yaiswa, patinoisa kana kugadzirisa pasuru ne yogati Iye achatibvunza kana isu tichida kumuvhotera.
Ndatenda Gabriel David nezve data uye PicoDev yeakanakisa posvo!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Aurvote kana maitiro ekuvhotera AUR repository mapakeji
Okay okay ndatoiwana, it was that meaning of voting
Kuvhota chii? Ndizvo here apa zvinoreva kusarudza wezvematongerwo enyika, semuenzaniso
Nyowani Acer Liquid Metal